Soomaaliya oo 5 qodob ka fa’iidday ka qeyb galka shir madaxeedka Afrika - Caasimada Online
Home Maqaalo Soomaaliya oo 5 qodob ka fa’iidday ka qeyb galka shir madaxeedka Afrika
Soomaaliya oo 5 qodob ka fa’iidday ka qeyb galka shir madaxeedka Afrika
Madaxweyne Farmaajo ka qeyb galkiisa Shirka 30aad ee Madaxda Afrika ayaa muhiimad gaar ah lahaa, maadama uu yahay shirkii ugu horreeyey ee Madaxda Afrika ay isugu yimaadeen oo uu ka qeyb galayo Madaxweynuhu tan iyo markii la doortay.
Haddaba Shirkaasi Maxay Soomaaliya ka faa’iiday
Soomaaliya markii ugu horreysay ayaa lagu casumay shirka dhaqaalaha wadamada Bariga iyo Koonfurta Afrika (COMESA) oo ka dhici doona dalka Burindi bisha Afaraad ee sanadkan.
Arrinkan ayaa yimi kaddib shir gaar ah ay yeesheen Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweyne K/xigeenka dalka Burundi Gaston Sindimwo.
Shirkan ayaa fursad u noqon doona ganacsatada Soomaalida ah madama Dowladu ay ka qeyb galkeeda ku soo gudbindoonto fursadaha ganacsi ee dalka iyo iskaashiga ganacsatadu ay la sameyn karaan dalalka ku baheynsan uruka dhaqaalaha ee COMESA oo ah dalalka ugu badan ee ay ka shaqeystaan ganacsatada Soomaaliya.
Soomaaliya waxa ay ku guuleysatay in isbaheysi ay ka sameysato Afrika oo ku aadan sidii ciidamada Soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen amniga guud ee dalka ka dib markii uu soo dhammaado howlagalka AMISOM.
Sidoo kale, Madaxweynuhu waxa uu dadaal u galay in Afrika ay ka qeyb qaadato dib u dhiska Ciidanka Qaranka, iyaddoona uu kulamo ku aaddan arrinkan la qaatay Madaxweyneyaasha Dalalka Jabuuti, Suudaan, Yugaandha, Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya iyo Madax kale, taasi oo keentay in Madaxdaasi ay kala hadlaan Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay sidii loo taageeri lahaa dib u dhiska Ciidamada Qaranka.
Aragtida hoggaanka Afrika ay ka aaminsanaayeen dalka ee ahayd in Soomaaliya ay hooy u tahay musuq maasuqa ayuu Madaxweynuhu gaashaanka ku dhuftay, kaddib khudbaddi uu goobta ka jeediyey oo uu ku sheegay in Soomaaliya ay dagaal ballaaran kula jirto la dagaalanka musuq maasuqa iyadoona dhabaha u xaareysa hannaan maamul oo lagu kalsoonaan karo, muddadii koobneyd ee dowladdani ay jirtayna ay ku tallaabsatay guul ku saabsan la dagaalanka musuq maasuqa, oo qaar ka mid ah ay ka markhaanti kaceen beesha caalamka gaar ahaan Bangiga Adduunka iyo Hay’adda Lacagta Adduunka.
4.Farriimaha kale ee laga dhix karo ka qeyb galka shirkan ayaa waxaa ka mid ah in Soomaaliya ay sii adkaysatay codka ay ku lahayd go’aan ka gaarista arimaha Qaaradda Afrika, iyadoona Madaxweyne Farmaajo ay ka waa hadleen in badan oo ka mid ah Madaxda Afrika sidii dib loogu habeyn lahaa Hay’adaha iyo shaqada ururka Midowga Afrika taas oo ka tarjumaysa muhiimadda iyo kaalinta Soomaaliya ay kaga jirto ururkan.
Waxaa la dar dar geliyey qorshaha Dowladeed ee ku saabsanaa ilaalinta danaha dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan Jaaliyadaha ku dhaqan wadamada Afrika oo Madaxweyne Farmaajo uu si gaar ah u gala dar daarmay madaxdii uu la kulmay, sida Madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salfakeer Mayaardiit oo uu kala hadlay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkiisa iyo in la ilaaliyo hantidooda iyo maalkoodaba, iyaguna ay qeyb ka noqdaan horumarka iyo iskaashi wanaagsan oo dhex mara labada dal.
Guud ahaan wafdiga Soomaaliya ee ka qeyb galay shikan waxa ay muujiyeen fir fircooni iyo biseyl ku saabsanaa arrimihii shirka lagu soo qaatay taas oo noqotay mid ay si weyn u tilmaamaan dadkii indhaha ku hayey Shir Madaxeedka 30aad ee Wadamada Afrika ee Addiis 2018.